Customer ngamakhasimende service ukwandisa ukubaluleka imikhiqizo!
Izikhungo kuyimpande ukuthuthukiswa Sine sika. yokuthengisa umqondo wethu umi ndawonye namakhasimende ethu kungakhathaliseki isimo. Thina uyokwahlulela ukusebenza kwethu ekutheni ziyenze kanjani thina ukwanelisa izidingo zamakhasimende ethu futhi uholwe inkolelo yokuthi amakhasimende ethu bayogcina ukunquma yimpumelelo kangakanani sizokwazi.
Ngemva yokuthengisa service:
I Sales uzokwazisa amakhasimende emahoreni angu-24 emva kokubeletha;
I Sales izogcina ukwaneliseka ukuphenywa kokuphulwa amaklayenti ngezikhathi, ehlaziya nalapho kufinyeta nezidingo amakhasimende 'futhi emakethe izimfuno ezingaba;
I Sales ngeke okokuqala ukwenza impendulo uMnyango Quality nge lokubhalwa kanye kokuthola izikhalazo amakhasimende 'mayelana nemikhiqizo. Khona-ke uMnyango Quality uzokwenza ukuhlaziywa, thatha noma kuthathwa izinyathelo zokulungisa, ukulandelela kanye ukuqinisekisa imiphumela ukuqalisa ukusebenza kanye ekugcineni ukwazisa imiphumela Sales. I Sales uzothumela le mibhalo ezihlobene nokuhlaziya kumakhasimende ukuthola isiqinisekiso yabo ukwaneliseka;
Thina ingaba into yokuhamba ahlukahlukene: ngu Air, ngu Sea, TNT / DHL / UPS / Fedex Express njll
Engineering design futhi isixazululo lobuchwepheshe:
Sinazo ikhono oqinile isixazululo lobuchwepheshe ikakhulukazi Engineering and Design. Sizimisele ukuklama nokuthuthukisa amasevisi kanye nokuthuthukiswa ngokuqhubekayo. Abasebenzi bethu ubunjiniyela has eminyakeni engaphezu nakho uzibuthe yokukhiqiza, ukuhlolwa, ikhwalithi.